ကျပ် တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေမှာ တစ်ထောင်တ န်တွေ အစားထိုးထ ည့်ပြီး သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲ သုံးစားလုပ်ခဲ့ တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီး – EverBestMM
မိဘ ကို လ�...
ရဲ တပ် ဖွ�...
ကျပ် တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေမှာ တစ်ထောင်တ န်တွေ အစားထိုးထ ည့်ပြီး သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲ သုံးစားလုပ်ခဲ့ တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီး
Ever Y | May 22, 2020 | News | No Comments
ကျပ် တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေမှာ တစ်ထောင်တန်တွေ အစားထိုးထည့်ပြီး သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းထံမှ သိရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့ရှိ KBZ ဘဏ်ခွဲ ၁ မှဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၄၈၅၁) သိန်းကို အခုလို အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မ အသီးသီးနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ် လို့ ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ မေ ၁၉ ရက် ညနေ ၃နာရီခန့်က ဘဏ်ကို ငွေလာထုတ်ယူသူတစ်ဦးက ငွေရေတွက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန် ကျပ်တစ်သောင်းအုပ်တစ်အုပ်မှာ တစ်သောင်းကျပ်တန်နှစ်ရွက်ကို အပေါ်နဲ့ အောက် တစ်ရွက်စီ ညှပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့(၉၈)ရွက်ကို တစ်ထောင်ကျပ်တန်တွေနဲ့ အစားထိုးထည့်ထားတာတွေ့ရှိရကြောင်း ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေအား အကြောင်းကြားခဲ့လို့ သိရှိခဲ့ရတာပါ။
ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေက ငွေထုတ်ကောင်တာနဲ့ ငွေသိုလှောင်ခန်းအတွင်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ငွေထုတ်ကောင်တာမှာ အစားထိုးလဲလှယ်ထားတဲ့ တစ်သောင်းတန်အုပ် သိန်း (၁၀၀) စည်း (၁၅) ထုပ် နဲ့ ငွေသိုလှောင်ခန်းမှာ အစားထိုးလဲလှယ်ထားတဲ့ တစ်သောင်းတန်အုပ် သိန်း (၁၀၀) စည်း (၄၀)ထုပ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေဟာ စုစုပေါင်း ငွေသိန်း (၅၅၀၀)ကျပ်ရှိရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ငွေ (၆၄၉) သိန်းကျပ်သာရှိပြီး စုစုပေါင်းငွေသိန်းပေါင်း (၄၈၅၁) ကွာဟနေတာကို တွေ့ရှိရလို့ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူက ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းမှာ မေ ၂၀ ရက် ညပိုင်းက အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ ပြစ်မူကျူးလွန်သူကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အခါမှာ လောင်းကစားလုပ်မိခဲ့တာလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးကြောင်း ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းထံမှ သိရပါတယ်။
ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းက အဲဒီဘဏ်ဝန်ထမ်းကို (ပ)၃၁၈/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၄၀၈ နဲ့ (ပ)၃၁၉/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ- ၃၀၉ တို့နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံးချုပ်မိန့် ရယူကာ ရွှေဘိုအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါက်ဖော်ကြီး ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ သံခင်းတ မန်ခင်း ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရပ်ဝန်းနှင့် လမ်း စီမံကိန်းကို အသက်ပြန်သွင်းရန် ကြိုးစားနေပြီလော
“မွန်ပြည်နယ် တွင် စောင့်ကြည့် လူနာများထဲ မှ သေဆုံး သူ (၃၈) ဦးအထိ ရှိ လာ
နိုင် ငံတကာ အလဲ လဲ အပြိုပြိုဖြစ်နေ တဲ့ ကိုဗစ် ကို နည်းဗျူဟာ ကောင်းေ ကာင်း နဲ့ ထိန်း ချုပ် ထားနိုင်တဲ့ မြန်မာ
အမေ ဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည်” လက် ထက် မြန်မာက ပြတ်ပြတ် သား သား ကျော်နို င်ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံ များ
မိဘ ကို လုပ်ကျွေးသော သားသ မီး တိုင်း လက်တွေ့ ခံ စား ရမည့် အကျိုး တရား (၁၂) ပါး
လူမည်းအမျိုးသား ဂျော့ခ်ျ ဖလွိုက် သေဆုံးမှု နဲ့ ပတ် သတ်ပြီး အမေရိ ကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နှ င့် Facebook ပိုင် ရှင် မက်ဇူကာဘတ် တို့ ငြိပြီ
မန္တလေး သို့ သွားလာကြ မည့် သူတွေအ တွက် သတင်းေ ကာင်းလေးရောက်ရှိလာပါပြီ
ရဲ တပ် ဖွဲ့ဝင် များ ယူနီေ ဖာင်းဖြင့် လူမှုကွန်ရ က် တွင် Tik Tok ကစားပါက ဥပဒေအရ အရေး ယူမည်
မြန်မာနိုင်ငံ က ကျပ် ( ၉၀ ) တန် တရုတ် ထုတ် နှာခေါင်းစည်းတွေ ရဲ့ ရင်ေ လးဖွယ် အရည်အေ သွး
Ever Best Website isaDaily News Blog and We provides Latest Local and International News, Breaking News, Celebrity News , Amazing News and Life Style.
Articles are Display in Both Zawgyi and Unicode Text, Videos and Photos.
မြန်မာ့ရာဇဝင်ထဲ က နာမည်ကျော် ကိုးသ င်္ချိုင်းသံဓား အစီအ ရင် ပြုလုပ်နည်း
© 2020 EverBestMM.